Depiote Alaina Ratsimbazafy “Ny teo an-tanako sy ireo vokatry ny antso avo no zaraiko”
Ilay fanampiana ataon'i Alain Ratsimbazafy Depioten’Atsimondrano ve avy any amin’ny fanjakana foibe? Haveriko fa noho ny antso maro voaraiko noho ny olana ao anatin'izao fihiboana dia maro no tratry ny olana mafy,
tsy afaka miasa mitady vola, tsy vitsy ny nilaza ihany koa fa tsy mba nahazo ilay fanampiana tany amin’ny fanjakana foibe,… Noho izany, tsy afaka hijery anareo fotsiny ny tenako ary nitady vahaolana. Teo ilay efa nolazaiko hoe tsy maintsy nozaraiko ny mason-tsokina izay teto am-pelantanako, fa teo ihany koa ireo namaly ny antso izay nataoko, hoy izy. Olona sahirana sy mananontena miisa 200 no nahazo izany teny Itaosy. Teny Tanjombato dia naterina isan-tonkatrano ny fanampiana ary manodidina ny 350 no nisitrak'izany. Jereo mandrakariva ny tsikalakalam-pihavanana, raha mbola misy azon'ny tananao atao,manaova, ampio ny manodidina aminao. Ary rehefa tsy misy ny azo zaraina ,ento am-bavaka izy fa tena lehibe indrindra izany, hoy ny fanentanan’ity olom-boafidy avy amin’ny TIM ity.